Ny lalao board 44 tsara indrindra ho an'ny ankizy araka ny taona | Omeo fialam-boly aho
Ny lalao kilalao tsara indrindra ho an'ny ankizy
Isaac | 17/12/2021 17:48 | Nohavaozina amin'ny 21/12/2021 09:01 | General
Rehefa misafidy ny lalao board mampihomehy indrindra ho an'ny ankizy, lafin-javatra maromaro no tsy maintsy raisina. Amin'ny lafiny iray, ny taona mifanaraka amin'ny nandrafetana io lalao io. Ny fanontaniana iray hafa dia ny hoe hilalao irery ve izy sa miaraka amin'ny ankizy hafa, na hiara-milalao amin'ny ray aman-dreniny na ny olon-dehibe, satria misy koa. lalao board natao ho an'ny rehetra. Ary, mazava ho azy, raha ny lalao dia fanabeazana ary koa ny fialam-boly, dia tsara kokoa.
Amin'ity torolàlana ity dia hanana ny fitaovana ilainao ianao mifidy ny tsara indrindra lalao board ho an'ny ankizy, ankoatra ny fananana fizarana manokana ho an'ny lalao board fanabeazana. Safidy ara-pahasalamana kokoa sy ara-tsosialy kokoa amin'ny consoles sy lalao video. Manoro hevitra azy ireo mihitsy aza ny manam-pahaizana manokana amin'ny fampivoarana ny zaza tsy ampy taona, satria izy ireo dia mampivelatra ny fahaiza-manao tsara, ny fandinihana, ny fahitana habakabaka, ny fifantohana, ny fisainana sy ny famoronana, ny fanapahan-kevitra, sns. Tsy isalasalana fa fanomezana lehibe ...
1 Ny lalao birao lafo vidy indrindra ho an'ny ankizy
1.1 Lalao Trajins - Virus
2 Ny lalao board tsara indrindra ho an'ny ankizy amin'ny taona
2.1 Ho an'ny ankizy 2 ka hatramin'ny 3 taona
2.1.1 Goula ny kisoa kely 3
2.1.2 Diset Ianarako amin'ny sary
2.1.3 BEAN Adela ny tantely
2.1.4 BEAN Voankazo voalohany
2.2 Ho an'ny ankizy 4 ka hatramin'ny 5 taona
2.2.1 Aza taitra ry dada a!
2.2.5 Goliata Jaws
2.2.10 Falomir Inona moa aho?
2.3 Lalao board ho an'ny ankizy 6 ka hatramin'ny 12 taona
2.3.3 Lalao Trivial Pursuit Dragon Ball
2.3.6 Lapan'ny fampihorohoroana
2.3.9 Hasbro Iza moa?
2.4 Lalao birao fanabeazana
2.4.1 Trano matoatoa
2.4.2 fandrika tempoly
2.4.3 Ilay biby goavam-be loko
2.5 Board lalao ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
2.5.1 Piozila 500
2.5.2 Puzzle 3D an'ny rafi-masoandro
2.5.3 Multi-lalao latabatra
2.5.6 Kapohy izany!
2.5.7 Ny dia voalohany
3 Torolàlana momba ny fividianana lalao board ho an'ny zaza tsy ampy taona
3.1 Taona fara-fahakeliny no soso-kevitra
3.4 Portability sy filaminana
Ny lalao birao lafo vidy indrindra ho an'ny ankizy
Anisan'ireo mpivarotra tsara indrindra, na lalao board ho an'ny ankizy lafo indrindra ary mahomby, dia teo amin'io haavon'ny varotra io noho ny antony mazava. Izy ireo no tena tiana sy malaza indrindra, ka tokony hasongadina manokana:
Lalao Trajins - Virus
Lalao Tranjis - Virus! -...
Iray amin'ireo mpivarotra tsara indrindra izy io, ary tsy misy vidiny. Lalao ho an'ny mpilalao 2, manomboka amin'ny 8 taona ary mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Izy io dia mampiankin-doha sy tena mahafinaritra, mora entina, ary izay tsy maintsy miatrika virosy izay navoaka. Mifaninana mba hialana amin'ny areti-mifindra ary ho voalohany amin'ny famongorana ny viriosy amin'ny fitokanana vatana salama mba hisorohana ny fihanaky ny aretina mahatsiravina.
Io no iray amin'ireo lalao karatra ho an'ny tanora sy ny antitra. Izy io dia milalao amin'ny fihodinana sy fihodinana, miaraka amin'ny curve fianarana mora ahafahana milalao hatrany am-piandohana. Fanampin'izay, manana ampahany amin'ny fanabeazana ihany koa izy, miaraka amin'ny isa 100 isa 2 hanaovana fanazaran-tena amin'ny fanisana, ary kajikajy hanamarinana ny fahafaha-manao.
Vidio ny SKYJO
Manomboka amin'ny faha-6 taonanao dia manana ity lalao hafa ity amin'ireo mpivarotra tsara indrindra ianao. Lalao board mety ho an'ny rehetra, indrindra ho an'ny fety. Tsy maintsy mampiseho fahaiza-manao amin'ny hafainganam-pandeha, fandinihana ary reflexes ianao, mahita marika mitovy. Ho fanampin'izany dia misy lalao mini 5 fanampiny.
Vidio ny Dobble
Afaka milalao manomboka amin'ny faha-8 taonany izy io, ary mety ho an'ny fianakaviana manontolo koa. Maherin'ny 1.5 tapitrisa kopia amidy ary loka iraisam-pirenena maromaro no karatra fiantsoana amin'ity lalao ity. Mendrika ny lazany. Manana karatra 84 misy sary tsara tarehy izy io, izay tsy maintsy faritanao mba hahafantaran'ny mpiara-miasa aminao izany, fa raha tsy misy ny mpifanandrina hafa manao izany.
Vidio ny Dixit
Manomboka amin'ny 6 taona ianao dia manana ity lalao board ity hanatsarana ny reflexes sy ny fahitana maso, izany hoe ho lasa lynx. Tafiditra ao anatin'izany ny endrika filalaovana maro, tsy maintsy mitady ny sarinao eo amin'ny solaitrabe aloha ary mahazo taila ambony indrindra azo atao.
Vidio ny Lynx
Ny lalao board tsara indrindra ho an'ny ankizy amin'ny taona
Mba hanampy anao amin'ny ny chose, raha jerena ny habetsahan'ny lalao board ho an'ny ankizy misy. Misy ho an'ny sokajin-taona rehetra sy ho an'ny tsiro rehetra, lohahevitra, andian-tantara sariitatra, ho an'ny fianakaviana iray manontolo, sns. Eto ianao dia manana sokajy maromaro mizara amin'ny taona na lohahevitra:
Ho an'ny ankizy 2 ka hatramin'ny 3 taona
Io no iray amin'ireo sisiny saro-pady indrindra, satria tsy ny lalao board fotsiny no ampifanarahana amin'ireo zaza tsy ampy taona ireo, ary tsy maintsy tandremana manokana mba hahazoana antoka fa azo antoka izy ireo. Ohatra, tsy maintsy arovana izy ireo, tsy tokony hisy ampahany kely azo atelina, na maranitra, ary ny atiny sy ny haavony dia tokony ho amin'ny haavon'ireo kely ireo. Etsy ankilany, tsy maintsy mahafeno ireo toetra sasantsasany ihany koa izy ireo toy ny mahasarika maso, tsotra, mifantoka amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao toy ny fahaizana môtô, ny fahaiza-misaina, sns. SASANY tolo-kevitra manan-kery ny birao lalao ho an`ny ankizy 2 ka hatramin`ny 3 taona Izy ireo dia:
Goula ny kisoa kely 3
Goula- Lalao The 3 ...
Ny tantara malaza amin'ny The 3 Little Pigs dia nivadika ho lalao board ho an'ny ankizy madinika. Miaraka amin'ny fahafahana milalao amin'ny fomba fiaraha-miasa na fifaninanana. Afaka milalao miaraka amin'ny mpilalao 1 ka hatramin'ny 4 izy io, ary manampy amin'ny fampivelarana soatoavina samihafa. Raha ny tanjona dia misy tabilao misy taila maromaro, trano kely, ary tsy maintsy hitondra ny taila misy kisoa ho any an-trano izy ireo alohan'ny hahatongavan'ny amboadia.
Vidio ireo kisoa kely telo
Diset Ianarako amin'ny sary
Diset - Lectron Ianarako ...
Lalao fanabeazana hafa ho an'ny ankizy hatramin'ny 3 taona izay miezaka ny hampifandray fanontaniana sy valiny. Hifalifaly izy ireo sady hanatsara ny fahaiza-manao toy ny fahaiza-misaina, ny fanavahana ny endrika, ny loko, sns. Misy karatra amin'ny lohahevitra isan-karazany ary rafitra manitsy ny tenany mba ahafahan'ny kely mijery raha toa ka namaly tsara izy noho ny pensilihazo majika izay manazava sy mamoaka feo.
Vidio Ianarako amin'ny sary
BEAN Adela ny tantely
Tsy ny Maya ilay tantely ihany no malaza. Tonga izao ity lalao board mahafinaritra ity ho an'ny ankizy 2 taona. Adela ilay tantely, izay hisarika ny sain'ny ankizy kely noho ny lokony ary ny tanjona dia ny hanangona mamim-boninkazo avy amin'ny voninkazo ary hitondra azy any amin'ny tohotra ka afaka manao tantely. Rehefa feno ny vilany tantely dia mandresy ianao. Fomba iray hanamafisana ny fahatsapana firaisankina, fahatakarana ary fianarana loko.
Vidio ny tantely Adela
BEAN Voankazo voalohany
Lalao HABA: Voalohany...
Lalao ho an'ny ankizy 2 taona. Ny famerenana ny mahazatra, toy ny El Frutal, fa natao ho an'ny ankizy madinika, mampifanaraka ny fitsipika amin'izy ireo ary manamora ny endrika. Fomba hanatsarana ny fahaiza-manao tsara sy ny fiaraha-miasa, satria tsy maintsy mandresy miaraka ianao, ary noho izany dia tsy maintsy mamely ny goaika ianao, izay tsy tokony hihinana ny voankazo.
Mividiana voankazo voalohany
Falomir- Tsindrio ny Pirate ...
Ity dia iray amin'ireo lalao mampihomehy indrindra ho an'ny ankizy hatramin'ny 3 taona. Misy fototra hametrahana barika, izay hampidirana ilay piraty ary tsy ho fantatra hoe rahoviana izy no hitsambikina. Izany dia ahitana ny mitondra sabatra ho any amin'ny barika nifandimby, ary izay voalohany manao ny piraty hitsambikina no handresy.
Vidio Pirate Pin
Ho an'ny ankizy 4 ka hatramin'ny 5 taona
Raha lehibe kokoa ny zaza tsy ampy taona, ny lalao ho an'ny zandriny dia ho zaza sy mankaleo loatra. Mila lalao manokana mifantoka amin'ny fanatsarana karazana fahaiza-manao hafa izy ireo, toy ny fisainana stratejika, fifantohana, fitadidiana, sns. IREO zaza tsy ampy taona manodidina ny 5 taona, afaka mahita lalao board mahaliana ho an'ny ankizy eny an-tsena ianao:
Aza taitra ry dada a!
Lalao mampientam-po ho an'ny ankizy 5 taona izay tsy maintsy manodina kodiaran'ny roulette sy mandroso amin'ny solaitrabe. Tsy maintsy hataony mangingina anefa izany, satria matory eo am-pandriana i Dada ary raha mitabataba ianao dia hamoha azy ary handefa anao hatory (miverena any amin'ny efamira fanombohan'ny solaitrabe).
Buy Aza mifoha dada
Izy io dia lalao board natao ho an'ny ankizy hatramin'ny 4 taona. Bondraka tena masiaka izay mandaka sy manipy ny entana rehetra, rehefa mandaka, lany ny vintana, mitsambikina eny amin'ny rivotra ny zavatra rehetra napetrakao aminy. Ity lalao ity dia manana ambaratonga 3 ny fahasarotana: beginner, intermediate ary mandroso. Izy io dia ahitana zavatra manangom-bokatra eo amin'ny laselin'ny burrito mifandimby.
Vidio ny Tozudo
Hasbro Gaming - Lalao ...
Olom-boafidy io mpanao fantson-drano io, mpisava lalana, ary sahirana izy. Ny kely dia tsy maintsy mametraka ny fitaovana eo amin'ny fehikibo mifandimby ary ny fitaovana tsirairay dia hampidina kely ny pataloha. Raha mianjera tanteraka ny patalohanao dia hitsoka rano. Izay tsy mandona ny hafa no handresy.
Mividiana Sloppy Plumber
Ity kisoa kely mahafatifaty antsoina hoe Antón Zampón ity dia hitsapa ny fahaizan'ny ankizy madinika. Lalao tsotra izay ahitana ny famahanana ny toetra mandra-mipoaka ny patalohany. Afaka milalao mpilalao 1 ka hatramin'ny 6 mifandimby izy ireo, mifalifaly mijery hoe firy ny hamburger hohaniny ...
Vidio Antón Zampon
Goliata Jaws Ny...
Ity dia lalao board hafa ho an'ny ankizy, izay ahafahanao manao fanaratoana mahafinaritra indrindra. Noana ny tuburon, ary nitelina trondro kely be dia be izay tsy maintsy hotehirizinao amin'ny fisintonana azy ireo hiala amin'ny vavany amin'ny fanjonoana. Mitandrema anefa, satria amin'ny fotoana rehetra dia hanaikitra ny antsantsa. Iza amin'ireo biby hafa azonao vonjena no handresy.
Tonga ity antoko ity, natao manokana ho an'ny ankizy hatramin'ny 4 taona, ary misy lohahevitra Disney. Kilalaon'ny birao multidisciplinary hianarana sy hifaliana. Izy io dia ampiasaina ho an'ny fianakaviana iray manontolo, afaka mandalo fitsapana maromaro mba hahazoana ny sarin'ireo mpilalao avy amin'ny orinasa noforonina. Mitovy amin'ny Antoko ho an'ny olon-dehibe ny fitsapana, miaraka amin'ny andrana maka tahaka, manao sary, sns.
Classic tsy lany tamingana. An-jatony sy an-jatony ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra manakaiky ny Krismasy na amin'ny fotoana hafa izay mampitombo ny fivarotana kilalao. Lalao board ho an'ny ankizy kely izay hipopotama fehezin'ny mpilalao efatra dia tsy maintsy mitelina ny baolina rehetra azo atao. Izay mahazo baolina be indrindra no handresy.
Mividy Ball Slot
Tendan-kanina ity voay ity, fa noho ny fihinanana be loatra dia tsy dia salama loatra ny nifiny ka mila fitarafana nify. Esory ny molara betsaka araka izay tratra alohan'ny hikatonan'ny vava fa ho hitanao ny nify mandratra ity voay namana ity. Lalao tsotra iray hafa izay mamporisika ny fahaiza-manao sy ny fivezivezena tsara ho an'ny ankizy madinika.
Vidio ny voay mpitsentsitra
Junior Grabolo, milalao ...
Lalao board fanabeazana mahafinaritra ho an'ny ankizy ao an-trano. Tena mavitrika izy io ary ahafahanao mampivelatra ny fahaiza-manao ara-tsaina, ny fandinihana, ny lojika ary ny fifantohana. Mora azo izany, manodina ny daoly fotsiny ianao ary tsy maintsy mahita ny fitambarana nivoaka teo anelanelan'ny karatra. Mamela lalao haingana izy io ary mety ho tonga lafatra amin'ny dia.
Falomir Inona moa aho?
Falomir-Inona aho ...
Lalao board mahafinaritra izay mety ho ankafizina, na dia ho an'ny olon-dehibe aza. Manampy amin'ny fanatsarana ny voambolana mifandraika amin'ny varotra izany, miaraka amin'ny fanohanan-doha izay hametrahana karatra izay hitan'ny rehetra afa-tsy ianao, ary tsy maintsy mametraka fanontaniana ianao mba hanandrana maminavina hoe iza ilay toetra miseho amin'ny karatra. Ity lalao ity dia mety amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manao maotera, ny saina ary ny saina.
Vidio Inona moa aho?
Lalao board ho an'ny ankizy 6 ka hatramin'ny 12 taona
Ho an'ny sokajin-taona tafiditra eo anelanelan'ny 6 sy 12 taonaMisy ihany koa ny lalao board miavaka izay mahafeno ny filan'ity sokajin-taona ity. Ireo karazana lahatsoratra ireo matetika dia manana fanamby sarotra kokoa, ary mampiditra ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao toy ny fahatsiarovana, tetika, lojika, fifantohana, orientation, sns. Anisan'ny tsara indrindra dia:
Ny Monopoly Classic dia mitovy foana amin'ny fahombiazana, ary tsy lany amin'ny lamaody izany. Tonga izao ny dikan-teny havaozina tanteraka mifototra amin'ny lalao video Fortnite. Noho izany, tsy hifototra amin'ny habetsahan'ny harena azon'ny mpilalao izany, fa ny habetsahan'ny fotoana tantaniny mba ho velona amin'ny sarintany na ny solaitrabe.
Eny, tonga amin'ny tontolon'ny lalao board ihany koa ny lalao video malaza famoronana sy velona Minecraft. Ny mpilalao tsirairay dia hanana ny toetrany manokana, ary hanangona sakana loharano maromaro. Ny hevitra dia ny hiady amin'ny zavaboary tsirairay avy. Ny mpandresy no voalohany hameno ny tabilao miaraka amin'ny puce.
Lalao Trivial Pursuit Dragon Ball
Fitiavana tsy misy dikany ...
Azonao sary an-tsaina ve ny mampiray ny fahafinaretana amin'ny lalao trivia malaza Trivial Pursuit miaraka amin'ny tontolon'ny anime Dragon Ball. Ankehitriny dia manana ny zava-drehetra amin'ity lalao ity ianao miaraka amin'ny fanontaniana 600 momba ny tantara malaza mba hahafahanao mampiseho ny fahalalanao momba ireo mpilalao ankafizinao.
Taona Cluedo: Manomboka amin'ny 8 ...
Famonoana saro-pantarina no nitranga. Misy 6 voarohirohy, ary tsy maintsy mandeha amin'ny sehatry ny heloka bevava ianao mba hahitana ireo famantarana mitondra anao any amin'ny mpamono olona. Manadihady, afeno, miampanga ary mandresy. Iray amin'ireo lalao fisaina sy fientanentanana tsara indrindra eny an-tsena.
Vidio ny Cluedo
Raha tianao ny mistery mampihoron-koditra, ity no lalao board anao. Lalao tsotra izay tsy maintsy mandalo misavoritaka mifono mistery hanandrana hitady zavatra very. Tsy maintsy mampiseho fahasahiana ianao mba hiezaka hivoaka miaraka amin'ireo zavatra ary handeha amin'ny lalan'ny labyrinth mba hisorohana ny fahasarotana samihafa izay ho hitanao.
Vidio ny Magic Labyrinth
Ny Castle of Terror Ny...
Atom Games dia namolavola ity lalao board mahafinaritra mampihoron-koditra ity, miaraka amin'ny karatra 62 misy endri-tsoratra sy zavatra goavam-be. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka milalao amin'ny fomba isan-karazany (toy ny mpanadihady, fomba haingana, ary fahatsiarovana hafa), manatsara ny fahaizan'ny ankizy kely ao an-trano.
Vidio ny Castle of Terror
Diset - Lalao Party & co ...
Dika hafa amin'ny lalao board malaza Party & Co ho an'ny ankizy. Ho afaka hanangana ekipa ianao ary hifalifaly amin'ny fanadinana samihafa. Izay tonga voalohany amin’ny kianja farany no handresy. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mandalo fitsapana fanaovana sary, mozika, fihetsika, famaritana, fanontaniana, sns.
Lalao Hasbro Gaming ...
Ny iray amin'ireo mahazatra, lalao izay niparitaka nanerana izao tontolo izao ary mitsapa ny fahaiza-manao sy ny fahalalana anatomika ny mpilalao. Ny marary iray dia marary ary mila fandidiana, manala ny faritra samihafa. Tandremo anefa fa mila mpandidy mpandidy ianao, satria raha mikasika ny rindrina ireo tapa-kazo dia hirehitra ny oronao ary ho very ianao… Ary raha tia minion ianao dia misy ihany koa ny dikan-teny miaraka amin'ireo endri-tsoratra ireo.
Hasbro Iza moa?
Hasbro Gaming izay, ...
Anaram-boninahitra hafa fantatry ny rehetra. Birao iray isaky ny olona izay misy andian-tsoratra miavaka. Ny tanjona dia ny hamantatra ny toetra mistery ananan'ny fahavalo amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana sy fanariana ireo endri-tsoratra izay tsy mifanaraka amin'ny famantarana omeny anao.
Lalao birao fanabeazana
Misy lalao board ho an'ny ankizy izay tsy mahafinaritra fotsiny, fa koa Mampianatra izy ireo, noho izany dia hianatra amin'ny alalan'ny filalaovana izy ireo. Fomba iray hanamafisana ny fianarana any an-tsekoly nefa tsy misy asa mankaleo na mandreraka ho azy ireo, ary mety misy votoatin'ny kolontsaina ankapobeny, matematika, fiteny, fiteny, sns. Ny tsara indrindra amin'ity sokajy ity dia:
Ny tranon'ny matoatoa ...
Lalao piozila fanabeazana mahafinaritra hampivelatra fahitana habakabaka, famahana olana, lojika miaraka amin'ny fanamby ambaratonga samihafa ary fifantohana. Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanatsarana ny fahaiza-manaon'ny saina sy ny fisainana mora azo amin'ny gamification.
Vidio ny tranon'ny matoatoa
Fandrika Tempoly - Smart ...
Ity lalao board fanabeazana ity dia manatsara ny lojika, ny fisainana mora, ny fahitana maso ary ny fifantohana. Manana ambaratonga fahasarotana maromaro azo isafidianana ianao, miaraka amin'ny fanamby 60 samihafa. Puzzle iray izay ny fahaiza-misaina no ho fanalahidin'ny filalaovana.
Vidio ny Trap Temple
Ilay biby goavam-be loko
Ilay biby goavam-be loko, ...
Kilalao fanabeazana mahagaga izay ahafahan'ny mpilalao mivezivezy amin'ny loko maneho fihetseham-po na fihetseham-po, ka mahatonga azy io ho endrika fianarana ara-pihetseham-po ho an'ny ankizy eo anelanelan'ny 3 sy 6 taona. Zavatra adino matetika any an-tsekoly ary tena ilaina amin'ny fahasalamany ara-tsaina sy ny fifandraisany amin'ny hafa.
Mividy Color monsters
Lalao natao ho an'ny ankizy mihoatra ny 4 taona ary mikendry ny hampivelatra ny fahaiza-miteny amin'ny teny anglisy sy espaniola. Mba hanaovana izany, dia mampiasa andian-karatra misy sary sy teny izay tsy maintsy mifandray mba hampifanaraka azy ireo tsara.
Vidio ny Zingo
Safari, ny lalao ...
Lalao iray ahafahan'ny fianakaviana iray mandray anjara, ary mianatra momba ny biby sy ny jeografia ny ankizy madinika. Miaraka amin'ny biby 72 sy toromarika samihafa amin'ny fiteny 7 (espaniola, anglisy, frantsay, alemà, italiana, holandey ary portogey).
Board lalao ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
Azonao atao ihany koa ny mahita lalao board ho an'ny ankizy izay ahafahan'ny ankizy milalao miaraka amin'ny olon-dehibe, na i neny, na dada, na dadabe, na zokiny, sns. Fomba iray hikarakarana ny kely indrindra amin'ny trano sy ny fandraisana anjara amin'ny lalaony, zava-dehibe ho azy ireo ary koa ho an'ny olon-dehibe, satria mamela anao mandany fotoana bebe kokoa sy mahafantatra azy ireo bebe kokoa. Azo antoka fa rehefa lehibe izy ireo dia tsy hanadino ireo fotoana laninao tamin'ny lalao toy ny:
Puzzles 500 Pieces of...
piozila 500 no lohahevitra avy amin'ny tontolon'ny Super Mario Odyssey World Traveler. Fomba fananganana fianakaviana, mety ho an'ny ankizy 10 taona. Rehefa tafangona izy dia manana refy 19 × 28.5 × 3.5 cm.
Puzzle 3D an'ny rafi-masoandro
Fomba iray hafa hilalaovana sy hianarana momba ny astronomia dia ny fananganana ity piozila 3D an'ny rafitra planeta ity. Ahitana planeta 8 ao amin'ny Rafitra Masoandro sy peratra planeta 2 izy io, ankoatra ny Masoandro, miaraka amin'ny ampahany 522 amin'ny fitambarany. Rehefa vita ny piozila dia azo ampiasaina ho haingon-trano. Raha ny taona tsara indrindra, dia avy amin'ny 6 taona.
Mividiana piozila 3D
ColorBaby - latabatra ...
Amin'ny latabatra tokana dia afaka manana lalao 12 samihafa ianao. Mirefy 69 sm ny haavony, ary 104 × 57.5 ​​sm ny sakany. Ahitana ny andian-lalao maro miaraka amin'ny sekely 150 mahery sy sehatra azo ovaina ho an'ny filalaovana dobo, baolina kitra latabatra, hockey, ping-pong, chess, checkers, backgammon, bowling, shuffleboard, poker, kitron-tsoavaly ary dice. Mety ho an'ny ankizy 6 taona sy ho an'ny fianakaviana manontolo. Fomba iray hanampiana amin'ny fampivelarana ny fahaiza-manao maotera, ny fahaiza-manao amin'ny tanana, ny fisainana lojika ary ny fianarana.
Mividy latabatra multigame
Lalao Mattel Scrabble ...
Hatramin'ny 10 taona, ity lalao ity dia mety ho iray amin'ireo mahafinaritra sy mampiala voly indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny taona rehetra. Iray amin'ireo lalao malaza indrindra izy io, manana tsipelina mahafinaritra hahazoana isa ambony indrindra miaraka amin'ny taila 7 kisendrasendra azon'ny mpilalao tsirairay. Fomba iray ankoatra ny fanatsarana ny voambolana.
Lalao Mattel- Pictionary ...
Iray amin'ireo kilalao malaza indrindra izy io, dikan-teny amin'ny lalao fanaovana sary mahazatra izay tsy maintsy hiezahanao hamantatra izay tianao hambara amin'ny sary ataonao. Tokony ho lalaovina amin'ny vondrona izany, ary hitondra anao amin'ny toe-javatra mahafinaritra indrindra, indrindra amin'ireo mpikambana izay manana fahaiza-manao sary Picasian ...
Kapohy izany! - Ny...
Izy io dia iray amin'ireo lalao board izay hahatonga anao hihetsika sy hanao ireo karazana fitsapana adala rehetra. Fanamby ho resena, miaraka amin'ny fitsapana mahatsikaiky 160 izay tsy maintsy mitsoka, mandanjalanja, mitsambikina, mitsambikina, miangona, sns. Mihoatra noho ny azo antoka ny fihomehezana.
Vidio ny Beat That!
Andron'ny mahagaga-Ny voalohany...
Iray amin'ireo lalao tian'ny ankizy kely nefa mety ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Ho an'ireo izay manana ny fanahin'ny mpitsangatsangana ary mahazo amin'ity dia lavitra fiarandalamby ity amin'ny alàlan'ny tanàn-dehiben'i Eoropa amin'ny sarintany lehibe izay hitondrany anao amin'ny fitsapana. Ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy manangona enta-tsarety mba hananganana lalana vaovao sy hanitarana ny tambajotran'ny lamasinina. Izay mahafeno ny tapakila mankany amin'ny toerana haleha dia mahazo ny lalao.
Buy Ny dia voalohany
Raha tianao ny lalao mifantoka amin'ny fampihomehezana anao, dia iray amin'ireo izany. Milalao miaraka amin'ny fianakaviana sy namana iray manontolo, miaraka amin'ny haavo 3 samihafa. Ao anatin'izany dia tsy maintsy manao mimicry haingana ianao mba hanandrana hahatonga azy ireo hahatakatra anao, ary miaraka amin'ny repertoire midadasika misy karatra 320.
Asmodee- The Island -...
Ity lalao board ity dia mitondra anao hiverina any amin'ny taonjato faha-XNUMX, eo afovoan'ny fikarohana. Lalao fitsangatsanganana izay ahitana nosy mistery iray eo afovoan'ny ranomasina ary lazain'ny angano fa manafina harena izy io. Fa ny mpitsangatsangana dia tsy maintsy miatrika sakana isan-karazany, biby goavam-be any an-dranomasina, ary ... volkano mipoaka izay hahatonga ny nosy hilentika tsikelikely.
Carcata - Lalao Board sy ...
Carcata dia mampifangaro ny aventure sy ny paikady. Ao anatin'izany dia tsy maintsy mametraka ny foko amin'ny nosy misy volkano ianao ary mampiseho hoe iza no foko matanjaka indrindra izay tafavoaka velona amin'ny loza ateraky ny toerana misy azy. Arovy ny faritra misy anao, araho ny fihetsiky ny foko mifanohitra, mandrosoa, manangona vatosoa ary tandremo hatrany ny fanahy miaro ny nosy ...
Torolàlana momba ny fividianana lalao board ho an'ny zaza tsy ampy taona
Sary maimaim-poana (Lalaon'ny ankizy amin'ny Sea Battle) avy amin'ny https://trange.biz/childrens-board-game-sea-battle-48363
Tsy asa mora ny fisafidianana lalao board, satria mihamaro ny sokajy sy anaram-boninahitra avoaka eny an-tsena. Mbola sarotra kokoa anefa ny fisafidianana lalao board ho an’ny ankizy, satria tokony hodinihina ny lafin-javatra sasany. ho fiarovana ny zaza tsy ampy taona:
Taona fara-fahakeliny no soso-kevitra
Ny lalao board ho an'ny ankizy dia matetika misy famantarana ny taona farany ambany sy ambony indrindra izay iantefan’izy ireo. Fanamarinana izay mahatonga azy ireo ho manan-kery ho an'io sokajin-taona io mifototra amin'ny fepetra fototra telo:
fiarovana: ohatra, ny ankizy kely dia afaka mitelina sombin-javatra toy ny dice, token, sns, ka ny lalao amin'io taona io dia tsy hanana ireo karazana piesy ireo. Zava-dehibe ny ananan'ny vokatra ny fanamarinana CE, mba hahafantarana fa nandalo ny fenitry ny fiarovana ny EU. Mitandrema amin'ny sandoka sy kilalao hafa tonga avy any Azia raha tsy misy ireo fanaraha-maso ireo ...
fahaiza-manaoTsy ny lalao rehetra dia mety ho an'ny sokajin-taona rehetra, ny sasany mety tsy voaomana ho an'ny ankizy madinika, ary mety ho sarotra na tsy azo atao, ary mety ho kivy mihitsy aza ka hiala amin'ny lalao.
afa-po: zava-dehibe ihany koa ny votoatiny, satria mety misy lohahevitra manokana ho an'ny olon-dehibe ary tsy mety amin'ny zaza tsy ampy taona, na tsy tian'ny sokajin-taona manokana satria tsy azony.
Ity endri-javatra ity dia tsy manakiana, fa eny zava-dehibe. Tsara ny mahafantatra ny tsirony sy ny safidin'ny mpandray ny lalao, satria mety ho tiany ny karazana lohahevitra manokana (siansa, mistery, ...), na koa hoe mpankafy sarimihetsika na andian-tantara amin'ny fahitalavitra (Toy Story). , Hello Kitty, Dragon Ball, Rugrats,…) izay ny lalao dia hanosika anao indrindra hilalao.
Ity toetra ity dia tsy mifandray amin'ny vidiny ihany, fa koa amin'ny fiarovana ny lalao (tsy misaraka amin'ny ampahany kely mety hiteraka fahakenda, potipotika maranitra miteraka ratra ...) ary faharetana. Ny lalao sasany dia mety ho tapaka na ho lany andro haingana, noho izany dia zavatra tokony hovonjena izany.
Portability sy filaminana
Ny zava-dehibe iray hafa dia ny fitadiavana lalao izay miditra boaty na kitapo izay ahafahanao mitahiry ny singa rehetra. Ny antony tokony hijerena izany dia:
Mba ahafahan'ny zaza tsy ampy taona mitondra azy mora foana.
Aza very ny sombiny.
Amporisiho ny filaminana rehefa mifarana ny lalao amin'ny fanasana azy haka.
Mora tehirizina izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Ny lalao kilalao tsara indrindra ho an'ny ankizy
Lalao board tsara indrindra ho an'ny olon-dehibe